သင်သည်ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုမသိပါသလော။ ကောင်းပြီ၊ ကြီးကျယ်သောပုံပြင်များပြောသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအစကတည်းကပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှာ၊ ဟိုတယ်စာအုပ်တွေ။ သံသယမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့အမြဲလိုချင်သည် စျေးပေါတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုရှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်မှုကိုမမေ့နိုင်သောကြောင့်ပြည့်စုံသောအခြေအနေများရှိသည်။ ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။
နောက်လာမည့်အားလပ်ရက်များအတွက်ကောင်းမွန်သောဟိုတယ်တစ်ခုကိုရှာရန်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်သို့နာရီပေါင်းများစွာမကြည့်တော့ပါ။ ယခုတွင်သင်၏အားထုတ်မှုအားလုံးကိုအခြား ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသောအလုပ်များကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
သင့်မှာတိကျတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာစိတ်မထားဘူးဆိုရင်သင့်ကိုငါတို့လမ်းညွှန်ပါစေ ဟိုတယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်အချက်အလက်အားလုံးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်အမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ရှာစရာတစ်ခု အကောင်းဆုံးဟိုတယ် ဒါဟာအွန်လိုင်းမှတဆင့်အေဂျင်စီများ၌တည်ရှိ၏။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးအစားကြားခံတွေရှိရင်စျေးတွေတက်လာလိမ့်မယ်လို့သင်စဉ်းစားရမယ်။
သင်လုပ်နိုင်သည် ဟိုတယ်စာမျက်နှာကိုသွား ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ၊ သူတို့ကမင်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်တဲ့အားသာချက်များဒါမှမဟုတ်စျေးနှုန်းတွေကိုအမြဲမပေးနိုင်ပါဘူး။
ပါတီများ: မတိုင်မီက ကြိုတင်မှာကြားထားပါစေအားလပ်ရက်သွားမယ့်နေရာကိုအနည်းငယ်လေ့လာတာကောင်းပါတယ်။ ရွေးချယ်ထားသောinရိယာတွင်မည်သည့်အဖြစ်အပျက်မျိုးမဆိုရှိပါကသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုဆိုရင်ဈေးနှုန်းကပိုပြီးစျေးကြီးလာတယ်။
အနီးအနားရှိမြို့များဖြေနောက်ဆုံးမှာအဲဒါကိုတွေ့ရင် သင့်အားလပ်ရက်ရက်စွဲများသင်သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာရန်လိုအပ်သောကြောင့်၊ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ကပတ်ဝန်းကျင်မြို့များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနီးကပ်။ ဟိုတယ်၌တည်းခိုမည်မဟုတ်ပါ။
ကြိုတင်ထုတ်ပေးသည်ဖြေ။ ။ ဘယ်မှာဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိပြီးသားနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရင်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ တိုးတက်မှုကအိပ်မက်ထဲကထွက်ပြေးခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်သည်။ စစ်ဆေးပါ အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့်ဟိုတယ်အပေးအယူများ ဒါမှမဟုတ်နံနက်စာသုံးဆောင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ဘော်ဒါဆောင်များသို့မဟုတ်ပင်စင်လစာများဖြေ - ငါတို့အားလုံးတတ်နိုင်တာကိုသိပြီးသား အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါဒါပေမယ့်လူတော်တော်များများအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်၏ခြေထောက်များကိုမြေပေါ်သို့ချပြီးအခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်အချိန်တန်ပြီ။ အကယ်၍ သင်တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့တစ်နေကုန်နေမည်ဆိုပါကဟိုတယ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ hostels (သို့) ပင်စင်တွေလို့ခေါ်တယ်။ နာရီနှင့်ဆေးကြောရန်လုံလောက်သောနာရီ။
ကလေးများအခမဲ့ဖြေ - အကယ်လို့ကလေးတွေနဲ့အတူခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ခွင့်ပြုပေးမယ့်ရွေးချယ်စရာတွေကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အသက်ပေါ်မူတည်။ အများအပြားရှိပါတယ် တန်ဖိုးနည်းဟိုတယ်များ အခန်းတစ်ခန်းတည်းမှာပဲအိပ်ဖို့ကလေးငယ်ကိုသူတို့ကသင့်ကိုမပေးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အခြေအနေပေါ်လစီကိုခင်ဗျားအနီးကပ်ကြည့်ရမယ်။
ဒီနေ့အင်တာနက်သုံးရတာကံကောင်းတယ်။ ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးသွားတဲ့အခါကောင်းကင်ထဲမှာလည်းကောင်းကင်ဖွင့်ထားတယ်။ မင်းလိုချင်တယ် အွန်လိုင်းဟိုတယ်ဘွတ်ကင်? ကောင်းပြီ၊ အရိုးရှင်းဆုံးပဲ။
သင်၏အားလပ်ရက်အတွက်သင်လိုအပ်သောဟိုတယ်ကိုသင်ကြည့်ပြီးပြီဆိုလျှင်နောက်တစ်ဆင့်မှာကြိုတင်မှာကြားထားရန်ဖြစ်သည်။ သတိမရှိသောအလှည့်အပြောင်းများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟိုတယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် (အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ဒီကိုနှိပ်ပါ) ။ သူကငါတို့အဘို့အလုပျအားလုံးလုပ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ ဦး တည်ရာကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ပါကများပြားလာလိမ့်မည် ဟိုတယ်ရွေးချယ်စရာများ။ သူတို့တွင်သင်၌၎င်း၏အရည်အသွေးအားလုံးတွေ့နိုင်သည်။ တည်နေရာမှစိတ်ကူးရရန်အပြောင်ဆုံးပုံရိပ်သို့။ သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့၊ သင့်ကိုစိတ်အချရဆုံးဖြစ်စေမည့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်။ ဒီရွေးစရာကိုနှိပ်လိုက်ရင်၊ စာမျက်နှာအသစ်ရနိုင်လိမ့်မယ် အခန်းကိုရွေးပါ။ အဲဒီမှာသင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သောနေ့ရက်များနှင့်အဖြစ်အပျက်အားလုံးကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်အားလုံး, သင်ကအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းနှင့်သင့်ဆိုဖာမှရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်အရာရာကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အခါလက်ခံရုံကိုသာနှိပ်ပါ။ ကြိုတင်မှာကြားထားချက်သည်ထိရောက်မှုရှိသည်။
ဟိုတယ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်သည့်အခါအားသာချက်တစ်ခုမှာဖောက်သည်များမှထားရှိသောထင်မြင်ချက်များကိုအနည်းငယ်ဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကအမြဲတမ်းအအောင်မြင်ဆုံးမဟုတ်ဘူး၊ သို့တိုင်၊ သင်ရွေးချယ်သောနေရာတွင်အသုံးအများဆုံးအရာများအကြောင်းသင်ရနိုင်သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဆူညံခြင်းကဲ့သို့သောအရာများကိုမကြာခဏဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်။ နှစ် တစ်နေရာရာသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်အဓိကအချက်များ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့တစ်တွေရှိသည်လည်းအရေးကြီးပါသည် ၂၄ နာရီ reception ည့်ခံခြင်း။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ဘယ်ကိုရောက်မလဲ၊ တစ်နေရာတည်းမှာတစ်ချိန်ကမသိရလို့အပြင်မှာအပြင်ထက်ပိုနေမှာသေချာတယ်။ ထိုနည်းတူစွာအဆောက်အအုံများနှင့်၎င်းတို့အားမည်သို့ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုသည်ကိုမေးမြန်းရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့သည်လည်းဤအတွက်အကဲဖြတ်အဖြစ်တွေ့လိမ့်မည် မှတ်ချက်စာမျက်နှာများ။ တစ်ခါတစ်ရံစာဖတ်ခြင်းသည်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်၊ အကြောင်းမှာသတင်းအချက်အလက်သည်မည်သို့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအဲဒီမှာမဖြစ်မှီ, ထိုအရပ်၏စိတ်ကူးတစ်ခုရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။